नेपाल आज | सविन राईको भन्दा कम छैन ८ कक्षामा पढ्दै गरेका लभइनको आवाज ! (भिडियाेसहित)
सविन राईको भन्दा कम छैन ८ कक्षामा पढ्दै गरेका लभइनको आवाज ! (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । भनिन्छ, ‘सपना ठूलै देख्नुपर्छ’ । ‘उडी छुनु चन्द्र एक’ भनेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त्यस्सै भनेका होइनन् । बाल मस्तिष्कमा ठूला ठूला सपना सजिनु नौैलो होइनन् । तर, आठ कक्षामा पढ्ने लभइन खड्गी सपना देख्दै मात्र छैनन् । सपनालाई पूरा गर्न उचित मार्ग पन तय गर्दै छन् । उमेरले लभइन १५ वर्ष मात्र पुग्दैछन् । उनको सपना छ ‘रकस्टार’ बन्ने । चार कक्षामा पढ्दादेखि नै उनले गितार बजाउन थाले । गीत गाउन थाले । लभइनको म्युजिकप्रतिको मोह देखेर उनका परिवार निकै खुशी छन् । अहिले उनी कक्षा आठमा पढ्ने भए । यत्तिको समयसम्म उनको उमेरमा कलिलोपन भए पनि गायन निकै खारिएको सुनिन्छ ।
स्टार हुने सपनालाई सार्थकता दिन उनी लागि परिरहेका छन् । विद्यालयमा हुने जस्तोसुकै म्युजिकल कार्यक्रममा पनि उनी पहिलो रोजाइमा हुन्छन् । शिक्षकहरूले उनैलाई लिड गर्न भन्छन् । उनी पनि हातमा आएको कुनै पनि मौका छुटाउँदैनन् । विद्यालयमा मात्र नभएर बाहिर कतै संगीत सम्बन्धी प्रतिस्पर्धा छ भने पनी सहभागि हुन्छन् । डनबस्को स्कुलले वर्षै साल आयोजना गर्ने म्युजिक कम्पिटिसनमा उनले विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । उक्त कम्पिटसनमा हरेक वर्ष दोस्रो या तेस्रो स्थानमा परेका पनि छन् उनी ।
अहिले नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजीलगायत भाषाका गीतको कभर गरिसकेका लभइन बालप्रतिभा हुन् । उनको प्रतिभा प्रष्फुटनकै क्रममा छ । लभइन खड्गी नाम रहेको उनका आफ्नै युटुब च्यानल पनि छ । जहाँ उनले आफूले गाएका गीतहरू सार्वजनिक गर्ने गर्छन् ।
गायनमात्र होइन उनमा वाद्यबादनको कला पनि छ । गीतार उनले कक्षा ४ देखि नै बजाउन थालेका हुन् । संगीतमा लाग्न उनलाई परिवारको पूर्ण साथ छ । उनले भने, ‘मलाई बाबाले धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ । मैले भन्नेबित्तिकै गितार पनि किनिदिनु भयो । बाबाको साथीहरु पनि संगीत क्षेत्रमै हुनुहुन्छ । त्यही भएर म पनि मलाई यो क्षेत्रमा सजिलो भएको छ ।’ आजभोलि काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा रातीकालिन समयमा ‘पब’ या ‘डान्स क्लब ’ मा रमाउने ‘ट्रेण्ड’ बढ्दो छ । उनी पबामा पनि कहिलेकाहीँ गीत गाउँछन् । साथमा उनका बाबु अभिभावक बनेर गइदिएका हुन्छन् ।
परिवारबाट राम्रै साथ सहयोग पाएका उनी तबला, ड्रम, जीम्बेलागायत थुप्रै इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउँछन् । सुुरुवाती दिनमा हातका औंला साना भएर पनि उनलाई गितार बजाउन कठिनाई भयो । तर म्युजिकप्रतिको उनको भोकले गर्दा त्यो दुखाइको केही लागेन ।
केही कभर गीत उनले नौ वर्षकै उमेरमा गाएका थिए । ९ वर्षकै उमेरमा उनले आफ्नो पहिलो गीत पनि रेकर्ड गराए । स्कुल स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताबाट पुरष्कृत भइरहनु उनलाई अब नयाँ कुरा भएन । पढाइका कारणले रियालिटी शोमा चाहिँ सहभागिता जनाउन पाएका छैनन् ।
भविष्यका लागि पनि उनले योजना बुनेका छन् । पढाई सकिएपछि आफ्नो एल्बम निकालेर चर्चित बन्ने र म्युजिकमा ‘वर्ल्ड टुर’ गर्ने । जसरी भएपनि उनलाई ‘रकस्टार’ त बन्नु नै छ । भन्छन्, ‘यदि भग्यले पनि साथ दियो भनेर रकस्टार बन्छु । दिएन भनेपनि सामान्य गायक भएर बसौंला ।’ पछि गएर नेपाली दोहोरी र आधुनिक सबैैलाई जोडेर आफ्नै किसिमले ‘फ्यूजन गीत’ बनाउन रहर भएको उनले बताए ।
म्युजिकसँगै उनले आफ्नो पढाईलाई पनि समय दिइरहेका छन् । पढाईंको महत्वलाई पनि बुझेका लभइनलाई अहिलेका चल्तीका गायक नितेशजंग कुँवर खुब मनपर्छ । पत्रपत्रिकामा पनि छाइरहेका लभइन भन्छन्, ‘व्यवसायिक रूपमा गीत गाउँछु मात्र भनेर हुँदैन । गीत गाउँदा ‘फिल’ आउनुपर्छ । फिलमा गीत गाउँदा स्वर पनि खुुल्ने र राम्रो सुनिने हुन्छ ।’